बलात्कार, चित्कार र बिचौलिया |
प्रकाशित मिति :2018-02-06 15:13:53
सरकारी संयन्त्रहरूको कमजोरीका कारण नेपाल बिचौलियाहरूको चंगुलमा फँस्दै गएको छ । जनयुद्धताका जब महिलाहरूको सहभागिता बढ्न थालेको थियो, त्यतिखेर म माओवादी पार्टीको महिला विभागको प्रमुखको हैसियतले हर्षित थिएँ ।
किनभने उनीहरूको सहभागिताले जनयुद्धलाई साँच्चैको जनताको युद्धमात्र नभएर प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने हतियारसमेतका रूपमा हामीले बुझेका थियौं । उनीहरूको सहभागिताले मलाई के अनुभूति गराएको थियो भने यो पुरानो राज्यसत्ताको विघटन र विनाशको प्रतीक हो । किनभने महिला भनेको परिवारभित्रको आधारभूत समुदाय हो । स्थानीय निकायभित्रको आधारभूत जनता हो । र देशभित्रको आधारभूत नागरिक हो । त्यसैले लेनिन भन्ने गर्थे– देशको आधारभूत स्थिति बुझ्नका लागि महिलाको आधारभूत परिवेशबुझ्नुपर्छ । आज नयाँ संविधानले नयाँ राजनीति र राजनीति गर्ने पार्टी, नेतृत्व, संगठन, योजनाको माग गरिरहेको छ । के हामीले ती पाएका छौं त ?
तर आजका ‘शत्रु’ को हुन् रु आजको शत्रु पुराना नेतृत्व, पार्टी, संगठनको संरचना, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, सत्ताकेन्द्रित योजना हो । त्यसैले यस्तो पेचिलो विषयमा तिनीहरू, तिनका भ्रातृ संगठनहरू प्रायस् मौन छन् । आज तिनीहरूले औंला ठड्याउँदा तीनवटा औंला आफूतिर सोझिन्छ भनेर चुप लाग्न थालेका छन् । अब शत्रु बाहिर होइन, भित्रै खोज्नु जरुरी छ ।
अब त देश झन्भन्दा झन् अस्थिर र परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । यस्तो बेलामा महिला हिंसाको विषय महिलाको मात्र सीमित र सरोकारको विषय बन्दैन । यो त देशको गरिबी, दुरवस्था र दिशाहीनताको प्रतीक हो । किनभने महिलामाथिको हिंसा भनेको अन्ततस् परिवार, समुदाय र देशमै बज्रिन आउँछ । जस्तै– घरभित्र एउटा निर्दोष महिला पिटिन्छिन् भने त्यसरी पिट्ने मान्छे हिंसकमात्रै होला रु सायद बेरोजगार होला, आफ्नो कामको हैसियत अनुसार दाम पाएन होला रु अर्थात् आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित पनि होला कि रु आफ्नी श्रीमती, बहिनी, दिदी, आमा, काकीलाई पिट्ने ती पुरुषले कालान्तरमा आफ्नो दाजु, भाइ, बुबा, हजुरबुबा, काकालाई पिट्न बाँकी राख्ला रु
विश्वमा ‘मि टु’ अर्थात् ‘यौनजन्य पीडामा म पनि’ अभियान चलिरहेको बेला नेपालमा भने देखिनेगरी, घाइते हुनेगरी, मर्नेगरी खुलेआम महिलाहरूको अस्मिता लुटिएको छ । तर आफूलाई देशीय तथा अन्तरदेशीय महिलारपुरुष अधिकारकर्मीहरू, भगिनी संगठनहरू, नेतागण ठान्नेहरू प्रायस् सबै मौन छन् । अझ आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी र त्यसका भगिनी संगठनहरू कहाँ छन्  ? विशेषगरी अहिले उपत्यकाभित्रै शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको बलात्कारका घटनाहरू उल्लेखनीय छन् । गएको मंसिर २ गते ललितपुरको गोदामचौर गाउँमा एउटा नवविवाहित महिला आफ्नो अफिसबाट घर फर्किरहेको मौका छोपी तीनजना पुरुषबाट सांघातिक हमलाका साथै बलात्कारसमेत भयो । तिनले किटानी जाहेर गर्दागर्दै पनि साथै मेडिकल रिपोर्ट नआउँदै ती तीनजना अभियुक्तलाई बिनाधरौटी साधारण तारेखमा छाडिएको छ । यो घटना नसेलाउँदै यही माघ ७ गते दरबारमार्गस्थित होटल ल्यान्डमार्कमा अर्को महिला सामुहिक बलात्कारमा पर्न गइन् । त्यस बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गराउनका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँको चलखेल बिचौलियाबाट भइरहेको गन्ध आइरहेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने दुवै घटनामा त्यहाँका स्थानीय प्रहरीहरूले पीडकलाई दण्ड दिनुको सट्टा मेलमिलाप गराउन खोजिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार गएको तीन वर्षमा महिला र बालबालिकामाथि भएको बलात्कारको तथ्यांक वर्षेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७०र७१ सालमा ९ सय ८१ बलात्कारका घटना भएका थिए भने ०७२र७३ मा आएर त्यो १ हजार ८९ पुगेको छ । त्यसैगरी २०७३र७४ मा आएर बलात्कारको घटना १ हजार १ सय ३१ पुगेको छ । यो त प्रहरीलाई रिपोर्ट गरेको आधारमा तयार पारिएको तथ्यांकमात्रै हो । कतिपय घटनाहरू प्रहरीले नै स्थानीय रूपमा मेलमिलाप गर्न खोज्छ । कतिपय घटनामा त पीडितले वा उसको परिवारले रिपोर्ट नै गर्दैनन् । कतिपय यस्ता घटनाहरूमा संघ–संस्थाद्वारा सम्बोधन गरिएको हुन्छ, जो आधिकारिक तथ्यांकमा आइपुग्दैन । यहाँनेर के बुझ्नु जरुरी छ भने जनताको सचेतना बढेको कारणले पनि यस्ता घटनाहरूको रिपोर्टिङ भएकोले यो बढ्दै गएको देखिन सक्छ । तर रिपोर्टका आधारमा दण्ड–सजाय नपाउँदा पनि यस्ता अपराधले प्रश्रय पाउँदै गएको हुनसक्छ । तसर्थ देशमा यस्तो दण्ड–सजायको अभावमा लैङ्गिक हिंसाले अरू अन्य अपराधलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै लैजान्छ भनेर हेक्का राख्नुपर्छ ।